“Ngoobani AmaNgqina KaYehova?”—Inyaniso Ithelekiswa Nezinto Ozivayo
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISilozi ISpanish Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBhulu IsiBislama IsiBulgarian IsiCatalan IsiCebuano IsiChichewa IsiChitonga IsiChitumbuka IsiCibemba IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEstonia IsiEwe IsiFiji IsiFinnish IsiFrentshi IsiGeorgia IsiGrike IsiHebhere IsiHiligaynon IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKazakh IsiKikaonde IsiKikuyu IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKorea IsiLatvia IsiLingala IsiLithuania IsiLuvale IsiMakedonia IsiMalagasy IsiMaltese IsiMyanmar IsiNgesi IsiNorway IsiOromo IsiPangasina IsiPhuthukezi IsiPolish IsiQuechua (saseAyacucho) IsiRashiya IsiRomania IsiSamoa IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwahili (saseCongo) IsiSwedish IsiTagalog IsiTatar IsiThai IsiTigrinya IsiTok Pisin IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTwi IsiUkrainian IsiUrdu IsiVietnam IsiWaray-Waray IsiXhosa IsiZulu
Udla ngokusibona sishumayela ebantwini. Mhlawumbi ukhe weva ezindabeni kuthethwa ngathi okanye weva abantu bethetha ngathi. Kodwa uwazi kakuhle kangakanani amaNgqina kaYehova?
Kwinto nganye ethethwa ngezantsi phawula kwibhokisi ethi yinyaniso okanye kwethi bubuxoki.
AmaNgqina kaYehova angamaKristu.
AmaNgqina kaYehova akholelwa kwanto ngendalo.
AmaNgqina kaYehova awakholelwa koogqirha.
AmaNgqina kaYehova ayamkela yonke iBhayibhile.
AmaNgqina kaYehova asebenzisa iBhayibhile yawo kuphela.
AmaNgqina kaYehova ayitshintshile iBhayibhile yawo ukuze ingqinele iinkolelo zawo.
AmaNgqina kaYehova ayakuphepha ukubandakanyeka kwimicimbi yabahlali.
AmaNgqina kaYehova abajongela phantsi abantu bezinye iinkonzo.
Iimpendulo uza kuzifumana kula maphepha alandelayo.
1 YINYANISO. Sizama ukuzilandela ngokusondeleyo iimfundiso nendlela awayeziphethe ngayo uYesu Kristu. (1 Petros 2:21) Noko ke, kwizinto ezininzi siyahluka kwezinye iinkonzo ezibizwa ngokuba ngamaKristu. Ngokomzekelo, sifumanise ukuba iBhayibhile ifundisa ukuba uYesu unguNyana kaThixo; akayiyo inxalenye yoThixo Oneziqu Ezithathu. (Marko 12:29) Sikholelwa ukuba umphefumlo uyafa nokuba ayikho kwiZibhalo into ethi uThixo ungcungcuthekisa abantu kwisihogo sikanaphakade. Kwaye sikholelwa ukuba abo bakhokelayo kwimicimbi yonqulo abafanele bazenze bakhulu kunabanye abantu.—INtshumayeli 9:5; Hezekile 18:4; Mateyu 23:8-10.
2 BUBUXOKI. Sikholelwa ukuba nguThixo odale yonke into. Kodwa asivumelani nezinye iinkolelo ezisekelwe kwindalo. Kutheni kunjalo? Kaloku ezininzi kwezi nkolelo ziyangqubana neBhayibhile. Ngokomzekelo, abanye babetha ngenqindi phantsi besithi iintsuku ezintandathu zokudala ziintsuku zokoqobo eziyilwe ziiyure eziyi-24. Kodwa xa kuthethwa “ngosuku” eBhayibhileni kusenokuba kubhekiswa kwixesha elide. (Genesis 2:4; INdumiso 90:4) Kanti ke, abanye abakholelwa kwindalo bathi umhlaba unamawaka ambalwa eminyaka ukho. Kodwa ke, iBhayibhile ibonisa ukuba umhlaba nendalo iphela zazikho ngaphambi kweentsuku ezintandathu zokudala. 1—Genesis 1:1.
3 BUBUXOKI. Siyalwamkela unyango. Abanye bethu ngoogqirha, njengogqirha ongumKristu owayephila ngexesha likaYesu owayebizwa ngokuba nguLuka. (Kolose 4:14) Kodwa ke, asilwamkeli naluphi na unyango olungqubana nemigaqo yeBhayibhile. Ngokomzekelo, asilwamkeli utofelo-gazi, kuba iBhayibhile ayivumi ukuba kutyiwe igazi.—IZenzo 15:20, 28, 29.
Sekunjalo, siye sikhangelele thina kunye neentsapho zethu olona nyango lusemgangathweni olufumanekayo. Enyanisweni, iindlela zokunyanga ezonga igazi ezazenzelwe ukunceda amaNgqina xa egula, ngoku zisetyenziswa ukunceda bonke abantu. Kumazwe amaninzi, ngoku nabani na ogulayo unokukhetha ukuzibaleka iingozi eziza nokutofelwa igazi, ezinjengezifo ezisegazini, ukulwa kwenkqubo yokukhusela umzimba neempazamo ezenziwa ngoogqirha.
4 YINYANISO. Sikholelwa ukuba yonke iBhayibhile ‘iphefumlelwe nguThixo kwaye iyingenelo.’ (2 Timoti 3:16) Loo nto iquka iTestamente Endala neTestamente Entsha. Thina la macandelo eBhayibhile siwabiza ngokuthi ziZibhalo ZesiHebhere neZibhalo ZamaKristu ZesiGrike. Ngale ndlela sitsho siphephe ukwenza iinxalenye ezithile zeBhayibhile zibe ngathi ziphelelwe lixesha okanye azisasebenzi.
5 BUBUXOKI. Zininzi iinguqulelo esizisebenzisayo xa sifunda iBhayibhile. Kodwa ke, kwiilwimi efumaneka ngazo, siye sithande iNguqulelo Yehlabathi Elitsha YeZibhalo Ezingcwele ekubeni isebenzisa igama likaThixo, ichanile kwaye icacile. Masenze umzekelo ngokusetyenziswa kwegama likaThixo elithi Yehova. Kwintshayelelo yenye inguqulelo yeBhayibhile, kukho uludwe lwamagama abantu abayi-79 abaye bafak’ isandla ngandlel’ ithile ekuvelisweni kwayo. Ukanti, kwale Bhayibhile inye ayilifaki igama loyena Mbhali wayo—uYehova uThixo! INguqulelo Yehlabathi Elitsha yahlukile kuba iyalibuyisela igama likaThixo kwiindawo elalifumaneka kuzo kwimibhalo yokuqala. 2
6 BUBUXOKI. Sithi sakubona ukuba iinkolelo zethu azihambisani neBhayibhile, siyitshintshe indlela esiziqonda ngayo. Kude kudala ngaphambi kokuba siqalise ukuvelisa iNguqulelo Yehlabathi Elitsha YeZibhalo Ezingcwele ngo-1950, sasebenzisa iinguqulelo ezazikho saza sakhela iinkolelo zethu phezu kwazo ngendlela eyiyo.
7 BUBUXOKI. Ukushumayela kwethu kunceda abantu abaninzi ekuhlaleni. Baninzi abantu esiye sabanceda bakwazi ukoyisa izinto eziyingozi, ezinjengokusebenzisa kakubi iziyobisi notywala. Iiklasi zethu zokufundisa abantu ukufunda nokubhala zinceda amawaka abantu ehlabathini jikelele. Sikwanceda naxa kuhle iintlekele kwaye asincedi maNgqina odwa, sinceda nabangengawo. Siye sizame ukubathuthuzela abantu abangamaxhoba ngamaxesha anjalo. 3
8 BUBUXOKI. Silandela icebiso leBhayibhile elithi “hloniphani bonke abantu”—kungakhathaliseki ukuba bakholelwa ntoni. (1 Petros 2:17, Today’s English Version) Ngokomzekelo, nangona amaNgqina engamakhulu amawaka kwamanye amazwe, asiye sizame ukunyanzela abeepolitiki okanye amalungu epalamente ukuba abeke imiqathango okanye avale umsebenzi wezinye iinkonzo. Kananjalo asiye sigaye inkxaso yabantu ukuze kupasiswe imithetho eza kunyanzela abantu ukuba baphile ngemilinganiselo yethu okanye ngokweenkolelo zethu. Kunoko, siyabanyamezela abantu ngendlela nathi esithanda ukuba basinyamezele ngayo.—Mateyu 7:12.
Eli nqaku linenkcazelo ethathwe kwiwebhsayithi yethu, u-jw.org/xh. Ukuze ufumane okungakumbi, yiya kwindawo ethi INKCAZELO ENGAKUMBI NGATHI > IMIBUZO ABANTU ABAQHELE UKUYIBUZA.
^ 1.Ngenxa yaloo nto, thina asiluphikisi uphando olubonisa ukuba kusenokwenzeka ukuba umhlaba uneebhiliyoni zeminyaka ukho, njengabanye abathi bakholelwa kwindalo.
^ 2. Ikho enye into ebalasele ngayo iNguqulelo Yehlabathi Elitsha: Ayithengiswa. Ngenxa yoko, izigidi zabantu ziyakwazi ukufunda iBhayibhile ngolwimi lwazo lweenkobe. Ngoku iNguqulelo Yehlabathi Elitsha ifumaneka ngeelwimi ezimalunga neziyi-130. Unokuyifunda nakwi-intanethi ku-www.jw.org/xh.
^ 3. Enye indlela esiyisebenzisa ngayo iminikelo kukunceda amaxhoba eentlekele. (IZenzo 11:27-30) Ekubeni lo msebenzi usenziwa ngamatshantliziyo, imali iya kumsebenzi wokunceda, kungekhona ekuhlawuleni imivuzo.